‘बलात्कारी मानसिकता’ कस्तो व्यक्तिमा हुन्छ ? – जनस्वास्थ्य खबर
‘बलात्कारी मानसिकता’ कस्तो व्यक्तिमा हुन्छ ?
गोपाल ढकाल। पछिल्लो समय बलत्कारका घटना वाहिर आइरहेका छन् । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, बलत्कारको मानसिक कारण पनि हुन्छन् । यस्ता विभिन्न मानसिक रोगी हुन्छन्, जसको दिमागमै बलत्कार हुन्छ ।
कसमा हुन्छ ?
बलत्कारमा मानसिक, स्वास्थ्य, यौन गडबडीलगायतले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।
मानसिक समस्या एका मानिसमा यौनको लत हुन्छ । उनीहरुमा उत्कट यौन चाहना हुन्छ । त्यस्ता मानिसहरु कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुदैनन् । उनीहरुको दिमागले जहिल्यै यौनको विषयमात्र सोचिरहेको हुन्छ ।
यस्ता खालका मानिसले बलत्कार पनि गर्न सक्छन् । ठूलालाई नसकेपछि बच्चाहरुलाई पनि बलत्कार गरेर यौन प्यास मेटाउन सक्छन् । यस्तो चाहना या लत केटा-केटी दुवैमा हुन्छ । हामीले बेलाबेलामा बालबालिकालााई बलत्कार गरेका घटना पनि सुनिरहेका हुन्छौँ । यसमा पनि मानसिक कारणले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।
मेनिया एक प्रकारको मानसिक रोग हो । यस्ता मानिसमा जुनसकै कुराको अधिक चाहना हुन्छ । यस्ता मानिसहरु आवेग र उत्तेजनामा आउने गर्छन् ।
यस्ता मानिसहरु अत्यन्तै चम्काउला, सेक्स चाहना व्यक्त गर्नेखालका हुन्छन् । डिप्रेशनमा गएका मानिसमा यौन चाहना कम हुन्छ भने मेनियाले ग्रस्त मानिसमा अत्याधिक हुने गर्छ । यस्ता मानिस बलत्कार गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
पीडोफेलिया अर्को मानसिक समस्या हो । यस्ता मानसिक समस्या भएका मानिसले यौन प्यास मेटाउनका लागि वालवालिकालाई प्रयोग गर्छन् । यस्ता मानिसले बालबालिकालाई यौन दुव्र्यवहार गर्ने, बालबालिकासँग बढी नजिक हुने जस्ता व्यवहार देखाउँछन् । यस्ता मानिसले बालबालिकालाई बलत्कार गर्ने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ ।
साइको सेक्सुअल डिसअर्डर
साइको सेक्सुअल डिसअर्डरमा धेरै रोगहरु पर्छन । त्यसमध्येको एउटा रोग यस्तो हुन्छ जसले घर्षण गरेर यौन प्यास मेटाउने गर्छन् ।
यस्ता मानिसले बढी यौन दुव्र्यवहार गर्छन् । यस्ता मानिसले आफ्नो यौनागं देखाउने, बाटोमा पनि घर्षण गर्ने, घर्षणको लागि विपरित लिंगीलाई प्रयोग गर्ने जस्ता हतकण्डा अपनाउँछन् । यस्तो प्रकारको मानसिक समस्या भएका मानिसले बलत्कार गर्न पनि सक्छन् ।
डिमेन्सीयाको समस्या प्रौढलाई हुने गर्छ । यस्ता मसस्या भएका मानिसको मस्तिस्कले गरिरहेको काम ठिक वा वेठिक भन्ने छुट्याउन सक्दैन ।
यस्तो समस्या भएका प्रौढले बालबालिकासँग शारिरिक सम्पर्क राख्न खोज्छन् । कहिलेकाँही आफ्नै नातीनातिनासँग यौन सम्पर्क गरेका कुरा सुनिरहेका हुन्छौँ । यस्तो घटनामा डिमेन्सीयाले पनि काम गरेको हुन सक्छ । यस्ता मानिसले आफ्नै घरका बच्चाहरुलाई यौनाअंग चलाउन भन्ने, यौन दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता तुच्छ गतिविधिसमेत गर्छन् ।
कति मानिसमा जाड रक्सीको लत हुन्छ । यसमा पनि माानशकि समस्याले भूमिका खेलेको हुन्छ । कुलतमा फँसेका मानिसको सोच्ने क्षमता कमजोर भएर जान्छ । यस्ता मानिसले नशाको आवेगमा बलत्कार गर्न पनि सक्छन् । त्यसैले यस्ता मानिससँग जोगिन आवश्यक हुन्छ ।
– कतिपय मनिसले अरुलाई दुख दिएर, पिटेर जवरजस्ती गरेर यौन प्यास मेटाउने गर्छन् । यो अर्को मानसिक समस्या हो । यस्तो समस्या भएका मानिसले प्राय जवरजस्ती यौन सम्बन्ध राख्न खोज्छन् । यस्ता मानिसले बलत्कार गर्ने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ ।
– कतिपय मानिसहरुले यौन सम्पर्क गर्दैनन्, तर हेरेर आनन्द लिने गर्छन् । यस्ता मानिसले पनि यौन दूर्व्यवहार गर्छन् । कतिपय अवस्थामा बलत्कार नै गर्न सक्छन् ।
यौन सम्पर्कको लागि अप्राकृतिक सम्बन्धको साहारा लिने मानिसहरु पनि हुन्छन् । यो पनि एउटा मानसिक समस्या हो । यस्ता मानिसहरु जनावरसँग यौन सम्पर्क राख्ने, बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने, यौनअंगभन्दा अरु ठाउँमा सम्पर्क गर्न खोज्ने जस्ता गतिविधि गर्छन् । यस्ता मानिसले मानसिकता नै अपराधि हुन्छ । यौन मात्र नभएर अरु पनि अपराध गर्छन् ।
के उपचार सम्भव छ ?
यस्ता रोग जन्मजात भएर पछि लाग्ने गर्छ । त्यसैले यी सबै रोगको उपचार सम्भव छ । कतिपय समस्याका उपचार अलि जटिल पनि हुन्छ । एक दुई वटा मात्र जन्मजात समस्या हुन्छन् । जसको उपचार निकै जटिल हुन्छ । तर, उपचार नै हुँदैन भन्ने चाही होइन । यस्ता रोगको उपचार नेपालमा पनि सम्भव छ ।
यस्तो समस्याबारे परिवारको आफ्नै सदस्यबारे पनि सचेत हुन जरुरी हुन्छ । कसैसँग व्यवहार गर्दा र सडकमा हिड्दा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिसले गर्ने गतिविधि सामान्य हो वा दुव्र्यवहार हो भनी बुझेर मात्र प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ । यस्ता मानसिक समस्या भएका मानिस नेपालमा मात्र नभएर संसारभर नै हुने गर्छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले आफु नै सुरक्षित रहनुपर्छ ।
लेखक ढकाल मनोसेवा केन्द्र का साइकोलोजीष्ट हुन्
साभार अनलाइन खबर
Related Topics:gopal dhakaljanaswasthya
बयलपाटा अस्पतालमा HA,Staff Nurse तथा CMA गरि १९ जना लाइ जागिरको अवसर
नेपाल जनस्वास्थ्य संघद्वारा स्वास्थ्य संरचनामा भएको अन्योलता हटाउन माग
जिल्ला जनस्वास्थ्य, प्रदेशिक तालिम केन्द्र,मेडिकल स्टोर तथा प्रयोगशालाको प्रस्तावित दरबन्दी
कञ्चनपुर: डाक्टर माथि पूर्व कांग्रेस सभासदद्धारा आक्रमण
देशमा ४८ सय डाक्टर बेरोजगार, सरकारी अस्पतालमा ९५० चिकित्सकको दरबन्दी खाली
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खोल्यो बिपीएच(BPH) मा भर्ना
यसरि गर्न सकिन्छ विदेशबाट आउनेहरुको स्वास्थ्य परिक्षण व्यावस्थापन
जेठ २६ काठमाडौं, प्रकाश परियार र सदिप रमण पुरी । विगत करिब ६ महिना देखि सम्पुर्ण विश्व जगत कोभिड-१९ को संक्रमणको चपेटोले थलिएको छ। विश्वभरका अधिकांश मानिसहरु आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरुलाई टक्क रोकेर घर भित्र बस्न बाध्य भएका छन। विश्व बजारीकरणका कारण मानिसहरुको आवतजावत बढिरहेको समयमा आफ्नै गतिमा चलिरहेको घडीको सुई रोकिए जसरि सारा विश्व रोकिएको भान भैरहेको छ। विश्व बजारीकरणका कारण नेपालका नागरिकहरु नपुगेका विश्वका सायदै देशहरु होलान । विश्व भर फैलिएको कोरोना संक्रमणको महामारीको कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्किने पर्खाइमा आतुर भएर बसिरहेका छन । विदेशी भुमीमा रोजगार,व्यापार तथा अध्ययनको शिलशिलामा जो जे का लागि गएको भए पनि मातृभुमी फर्किने आशामा छन। कतिको रोजगार गुमेको परिवेश छ भने कतिको अध्ययन सकिएको र कतिको करार सेवा अवधि सकिएको अवस्था छ । पछिल्लो डेढ दशकमा खाडी मुलुकमा रोजगारीको लागि जाने नेपालीहरु लाखौंको संख्यामा छन। खाडी मुलुकमा रोजगारीको लागि गएकाहरु आफू कार्यरत रोजगार दाता कम्पनीहरुले खाना र बस्न समेत दिन नसकी नेपालीहरुको विचल्ली हुन थालेका समाचारहरु छिटफुट अखबारमा आउन नथालेका पनि हैनन तथापी सिङ्गो विश्व नै प्रभावित बनेकोले आफ्नो र पराई नभनी मानवियताको आधारमा थोरै भए पनि सहयोग गरिरहेका छन तर विडम्बना मानवीय रुपमा सदासयता कहिले सम्म भनेर कसैले भन्न सक्ने स्थिति भने छैन ।
गैह्रआवसिय नेपाली संघ (NRNA)को तथ्यांक अनुसार गत सोमबार सम्म विश्व भर छरिएर रहेका नेपालीहरु मध्य १४ हजार ४ सय २५ जना कोरोना संक्रमित भएका छन भने १ सय २१ जनाले विदेशी भुमिमा ज्यान गुमाएका छन । यतिबेला आफ्नो रोजीरोटीका लागि गएका हुन या व्यापर प्रयोजनका लागि अथवा विदेशी भुमिमा त्यहीँको नागरिकको हैसियत बनाउन सफल नै किन नहुन स्वदेशी भुमी, आफू जन्मिएको माटो मातृभुमीमा फर्केर आउन आतुर छन। जब विषम परिस्थितिको सृजना हुन्छ तब आफू जन्मिएको भुमी प्रतिको माया, आफन्त प्रतिको सद्भाव र सदासयता बढेर जान्छ जुन मानवीय दृष्टिकोणले स्वभाविक पनि हो । यतिबेला नेपाल सरकार विदेशी भुमीमा रहेका नेपालहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने तयारीमा छ । सानो अर्थतन्त्र, अल्प विकसित जे भए पनि विपदको समयमा आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसै कथनलाई हृदयंगम गर्दै देश बाहिर रहेका नेपाली मनहरुलाई देश भित्र फिर्ता ल्याउने कुरा सरकारको कोभिड-१९ संक्रमण ,रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिलाई प्रतुत प्रतिवेदन अनुसार करिब १० लाख नागरिक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिने अनुमान गरिएको छ भने देशको खुल्ला सिमाना जोडिएको भारतबाट तत्काल करिब ३ लाख ५० हजार जना भित्रिने आंकलन गरिएको छ ।
यसरी १३ लाख भन्दा बढी मानिसहरु एकैपटक स्वदेश फर्किदाँ तिनीहरुको रोजगारी लगायतको व्यवस्थापनमा राज्यलाई ठूलो भार पर्ने त छँदैछ त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यतिका संख्यामा एकसाथ देश फर्किदा उनिहरु संगै संक्रमण फैलिने जोखिम पनि त्यतिकै रहन्छ । सरकारको कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले भारतबाट नेपाल फर्किने मध्य करिब १५% नागरिक संक्रमित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ र यसरी फर्किने नेपालीहरु संगै संक्रमण पनि भित्रिन सक्ने परिस्थितिको व्यवस्थापन राज्य र सरकारको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । चुनौतीपूर्ण छ भन्दैमा राज्य त्यसबाट विचलित हुन र पर भाग्न मिल्ने न परिस्थिति छ न संभावना नै अत : राज्य र तिनै तहका सरकार सङ्गै हरेक नागरिक पुर्ण जिम्मेवार र संवेदनशील भएर परिस्थितिको सामना गर्नुको विकल्प पनि छैन । यसरी एकैपटक १३ लाख बढी मानिसहरुको कोरोना परिक्षण गर्नु आवश्यकता संगै व्यवस्थापकीय हिसाबले गार्‍हो र दुरुह पनि त्यतिकै छ।
एकसाथ यतिका नागरिकको परीक्षण गर्न सजिलो र सहज त छैन तथापि राज्यले नसक्ने भने होइन त्यसको लागि राज्यका सबै संयन्त्र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परिक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउन जरुरी छ। यहाँ एउटा मोडल प्रस्तुत गरिएको छ,झट्ट हेर्दा केही खर्चिलो भए पनि त्यसको विकल्प न नागरिक सङ्ग छ न सरकार र राज्यसंग नै । सरकारले कुल जनसंख्याको २% को कोरोना परिक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २% मात्रको कोरोना परिक्षण गर्दा लगभग ६ लाख जनाको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा ६ लाख जनाको जाँच गर्न करिब १२० अर्थात ४ महिना लाग्ने देखिन्छ त्यसैले परिक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन। परिक्षणको दायरालाई व्यापक र सुलभ बनाउनको लागि जनशक्तिको समुचित प्रयोगको साथै स्वचालित RT PCR मेसिन जडानको अति आवश्यक देखिन्छ साथै RT PCR जाँचलाई व्यापक र आर्थिक मितव्ययिताको लागि हाल भई रहेको RT PCR परिक्षणको तरिका/ पद्धतिमा पनि केहि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।जसमा हाल प्रयोग हुँदै आएको एक नमुना एक जाँचको पद्धतिलाई परिमार्जन गरि टेष्टको रिपोर्ट पोजिटिभ नआउँदा सम्म कम्तीमा ५ नमुना ,एक जाँचको नीतिलाई अबलम्बन गर्न सकिन्छ यसरि यो निति अवलम्बन गर्दा परिक्षणको दायरा कम्तीमा दोब्बर हुनुको साथै आर्थिक रुपमा पनि केही राहत मिल्न सक्छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा ५ हजार टेष्ट क्षमताको अत्याधुनिक स्वचालित मेसिन जडान गर्न जरुरी छ । यो कार्य गर्न केही कठिन र चुनौती पनि छ तर यसको विकल्प भने छैन । परिक्षणको दायरा बढाउनको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन संगै हाल नेपालमा भैरहेको खर्चिलो परिक्षणको पद्धतिलाई सुधार गर्न जरुरी छ । जर्नल अफ क्लिनिकल माईक्रोबायोलोजी (अमेरिकन सोसाइटी फर माइक्रोबायोलोजी) मा प्रकाशित अनुसन्धन अनुसार हाल नेपालमा प्रयोग भैरहेको VTM (Viral Transport Media) र RNA extraction kit सहितको RT PCR टेष्ट गर्ने पद्धतिलाई केही सुधार र थप अध्ययन गरि (0.9%) Phosphate Buffered saline (PBS) बाट RT PCR टेष्ट गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु आवश्यक छ। जसले अहिलेको खर्चिलो RT PCR test पद्धतिलाई कम खर्चिलो बनाउनुको साथै सजिलो र छिटो छरितो समेत बनाउन मद्दत पुग्दछ ।
स्वास्थ्य परिक्षण व्यावस्थापन मोडल
यहाँ प्रस्तुत गरिएको मोडल अनुसार RDT टेस्टलाई विश्वव्यापी रुपमा त्यति भरपर्दो नमानियता पनि यसले स्वास्थ व्यक्तिहरूको Screening गर्न सहयोग गर्ने हुँदा र हवाई मार्ग होस वा स्थलमार्गका प्रवेश विन्दुमा नै RT PCR टेस्ट गर्न प्राविधिक रुपमा सम्भव नहुने भएकोले RDT test नेपाल प्रवेश गर्ने बिन्दुमा नै सबै नागरिकको गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी RDT टेष्ट गर्दा संक्रमित भए नभएको सुरुमा नै थाहा पाउन सहयोग गर्ने हुँदा क्वारेन्टाइन स्थलमा संक्रमण फैलिन सक्ने स्थितिमा समेत कमि आई क्वारेन्टाइन स्थलको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ। प्रवेश गर्ने स्थानमा नै RDT टेस्ट गरि त्यस अनुसार रिपोर्ट पोजिटिभ र नेगेटिभमा छिट्याउँदा पोजिटिभ हुने जति सबैलाई नजिकको आइसोलेसन स्थलमा स्थानान्तरण गर्ने र नेगेटिभ हुनेहरुलाई सम्बन्धित स्थायी ठेगाना अनुसार स्थानीय तह संग समन्वय गरि यातायातको उचित प्रबन्ध सहित स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्दछ। त्यस पश्चात जति सक्यो छिटो RT PCR जाँच गर्नु पर्दछ र RT PCRको रिजल्ट अनुसार पोजेटिभ रिजल्ट आउनेहरुलाई लक्षणको गम्भीरताको आधारमा मध्यम लक्षण र सिकस्त लक्षण भएका संक्रमितहरुलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्ने र लक्षण नदेखिएका, हल्का लक्षण भएका संक्रमितहरुलाई सम्बन्धित पालिकाको आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ र नेगेटिभ रिजल्ट आउनेहरुलाई १४ देखि २१ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सल्लाह दिनु पर्दछ ।
राज्यलाई ठुलो संख्यामा विदेशीएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यावस्थापन गर्न कठिन हुने हुदा आफ्नो खर्च आफै वहन गर्न सक्नेहरुलाई होटलमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यावस्था गरि राख्ने व्यावस्था गर्ने कुरा पनि राम्रो विकल्प हुन सक्दछ तर आफ्नो खर्च वहन गर्न नसक्नहरुलाई राज्यले जिम्मा लिनु पर्दछ।
स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्रोत अनुसार हाल नेपालमा जम्मा २६,९३० अस्पताल शैय्या रहेको छ भने १५९५ सघन उपचार शैय्या (ICU), ८४० भेन्टिलेटर , १९४ आईसियु (ICU) भएका अस्पताल, १११ कोभिड क्लिनिक भएका अस्पताल र ३०७६ आईसोलेसन शैय्या रहेको उल्लेख छ (यो लेख तयार पार्ने बेला सम्म) जुन अत्यन्तै न्यून हो । यो अवस्थामा यदि हाम्रो देशमा स्थिति भयावह भयो र संक्रमितहरुमा अन्य देशमा जस्तो सघन खालका लक्षण र चिन्ह देखिने अवस्था भयो भने अस्पताल बाहिर पालो कुरेर मृत्युलाई पर्खनुको विकल्प नहुन सक्छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ लाई छोटो अवधिमा नियन्त्रण गर्न सफल भएका देशहरुले अवलम्बन गरेको पद्धति वा अपनाएको विधिलाई हेर्ने हो भने मुलत परिक्षण गरि पहिचान गर्ने र आइसोलेसन गर्ने तथा आवगमन रोक्ने नै हो । त्यसैले हाम्रो देशमा पनि परिक्षणको दायरालाई बढाउने, सम्पर्क पहिचान (Contact Tracing) लाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउने ,संक्रमितलाई आइसोलेसन गर्ने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवगमनमा रोक लगाउने कार्यलाई अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ मा जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा गर्न सक्ने तथा सरुवा रोग सम्बन्धि ऐन २०२० अनुसार नेपाल सरकार यतिबेला देशमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने मनसायमा देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा विदेशबाट फर्किनेहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको परिवेसमा कोभिड-१९ को संक्रमण समुदाय स्तरसम्म फैलिन गई परिस्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर नजाला भन्न सकिन्न । अहिले सम्मको अवस्थालाई नियाल्दा नेपालमा कोभिड-१९ भयावह स्थितिमा नरहेकोले तत्काल जाँचको दायरालाई बढाएर विदेशबाट आउने सम्पुर्णको परिक्षण गर्दा समुदायस्तर सम्म कोरोनाको संक्रमण रोक्न सकिन्छ । अन्त्यमा माथी प्रस्तुत गरिएको मोडल अनुसार विदेशबाट फर्किने नागरिकहरुको RDT देखि RT PCR सम्मको जाँच गरि आईसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन प्रभावकारी गराउँदा अस्पतालमा बिरामीहरुको लागि खर्च हुने आइ. सि. यु/ भेन्टिलेटर लगायतका औषधी जन्य खर्चमा व्यापक कटौती हुन गई रोग समुदाय स्तरसम्म फैलिनबाट रोकिने र राष्ट्रले छोटो समयमा नै कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कुरामा निश्चिन्त हुन सकिन्छ ।
रोगको कारण नबनोस “चाडपर्व” यसरी बच्न सकिन्छ फुडपोइजनबाट
डा. लालित कुमार मिश्र, काठमाडौं। दशै-तिहार हामि नेपालीहरुको महान चाँड हो । आफ्नो परम्परागतरुपमा सबैले आ-आफ्नो गच्छेनुसार चाडँपर्व बडोहर्षोउल्लासका साथ मनाउने गर्दछन् । खुशीको पर्व दशैं मिठोमसिनो स्वादिलो मासुका परिकार खाएर, घरमा आउने पाहुनाहरुलाई ख्वाएर मनाईन्छ। अधिकांश नेपालीलाई खानपिन गर्न, रमाईलो गर्नका साथै साथीभाई र आफन्तलाई भेटन भ्याइ-नभ्याइ हुन्छ । यसैगरी केटा-केटीहरुलाई नयाँ लुगा लगाउन, पिङ खेल्न, चँगा उडाउन मज्जा लाग्छ ।
यस चाँडपर्वमा आ-आफ्नो रितिरिवाज अनुसार खाद्यपदार्थ भोजनमा समावेश गरेतापनि विशेषत; माछा, मासु तथा मासुका बिभिन्न परिकारलाई बढि प्राथमिकता दिइन्छ । दशैँमा मासु खाईन भने दशैँ नै आएको जस्तो लाग्दैन । नेपाली समाजमा धेरैजसो मनाईने चाडँपर्वहरु बिशेषप्रकारका खाना-खाने र ख्वाउनेसँग परम्परा जोडिएका हुन्छन् । दशैँको बेलामा बोका, खसी, राँगो, भैशी, कुखुरा, हाँस, परेवा, खरायो, मृग, भेडा, च्याङग्रा आिदको मासु खाने प्रचलन छ ।
कतिपय ठाउँमा त मासु-भात, मासु-चिउरा खानकै लागि दशैँ आउनभन्दा ३/४ महिना अगाडी नै खसी, बोका, सुँगुर, बँगुर आदि पालेर राखेको हुन्छ । मिठो र स्वादिलो खानेकुराले दशैँलाइ रमाईलो त बनाउँछ । तर खानपानको संतुलन र सरसफाइमा बिशेष ध्यान दिन सकिएन भने बिरामि (अस्वस्थ्य) बनाउने तथा दिर्घरोगि ( ब्लडप्रेशर, डायबिटिज, दम, युरिकएसिड) भएका ब्याक्तिहरुलाई सिकिस्त बनाउने समय पनि चाडपर्व नै बन्न जान्छ । चाडपर्वको लागि भनेर ल्याईएका माछा, मासु, मिठाई, मिल्क प्रोडक्स तथा घरमा बिभिन्न खानेकुराहरुको परिकार बनाएर लामो समयसम्म राख्ने । पाहुनालागयत आफुहरुलेसमेत खाने तथा आफन्त कहाँ जाँदा कोशेलीको रुपमा मिठाई, फलफुलहरु लाने गरिन्छ । यसैगरी दशैँ मान्न आएका पाहुनाहरुलाई केहीदिन देखि सञ्चित गरी राखेका माछा, मासु एवं अन्य परिकारहरु खुवाएर स्वागत गर्ने गरिन्छ । खानेकुराहरुलाई उचित तापक्रममा व्यवस्थित ढंगले नराखिने हुँदा माछा, मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ मिठाईहरुमा चाँडै ब्याक्टेरियाहरु उत्पन्न हुन्छन् । यस्ता खाना खानाले फुडपोइजन हुने गर्दछ । यसैप्रकार स्वच्छ खानेपानी र भान्छा कोठाको सरसफाइको कमीको कारण पनि खानेकुरा संक्रमित भई मानिस बिभन्न रोगका शिकार बन्ने गरेका छन् । यसकाे शिकार हुनेमा बुढा-पाका, केटाकेटीहरु तथा दिर्घरोगीहरु पर्दछन्, जस्तै- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, यरिकएसीडका बिरामी । यसले गर्दा चाँडपर्वका बेला धेरै मानिस बिरामी भएर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी वा प्राईवेट क्लिनिकमा पुग्छन् । त्यसमध्ये कतिपयको त उपचार नपाएर वा उपचारको क्रममा मृत्यु पनि हुने गरेको छ
#फुडपोईजनको कारण ;- दुषित, बासी र राम्रोसँग नपाकेको काँचो खानामा पाइने- ब्याक्टेरिया- ई-कोलाइ, स्टेफाइलोकोकस जस्ता जिवाणु युक्त खाने कुराखानाले फुडपोइजन हुने गर्दछ । यसका साथै फोहोर भन्छा कोठा, फोहोर भाँडाकुडाहरुमा बनाइएका खानाहरु पनि फुडपोईजनका कारण बन्न सक्छन् । त्यसैगरी खाना बनाउने कुक (भान्छे) को ब्याक्तिगत सरसफाइमा पनि यस्ता कुराहरु भरपर्दछ ।
# फुडपोइजनका लक्षणहरु ;- ब्याक्टेरिया- खानेकुरा- पिउनेपानी को माध्यमले शरीरमा प्रवेशगरेपछि केहिसमय मै (जिवाणु) अनुसार ढिलो या चाँडै बिभिन्न किसिमले शरिरले प्रतिक्रिया देखाउने गर्दछ । बेक्टेरिया अनुसारको जस्तै- भिव्रियोकोलेरा ( हैजा) को जिबाणुले चौलानी जस्तो पातलो दिशा जाने साथै बान्ता हुने । यसैप्रकार सिगेला (जिबाणु) ले दिशाबाट रगत जाने , अम्बिवाले चिप्लो दिशा(आउँ) जाने जस्ता समस्याहरु देखाउने गर्दछ । भने बान्ता हुने, झाडापखाला लाग्ने, उधो-उभो (मुखपेट) एकैचोटी चल्ने, रिगँटा लाग्ने, दिशामा रगत आउँ देखापर्ने, ज्वरो आईरहने, पेटमा ऐठन हुने, मुटुको धडकन अस्वाभिकरुपले बढने, शरिर झम झमाउने, औठ-मुख सुक्ने आदि जस्ता लक्षणहरु देखापर्ने गर्दछन ।
# बच्ने उपाय ;- दैनिक खाने खानाको सुरक्षा र सरसफाईलाई ध्यान दिन सकेमा फुडपोईजनबाट पुर्णरुपमा बच्न र बचाउन सकिन्छ । काँचो माछा, मासु, राम्ररी न पाकेको खाने कुरा पकाएर फ्रिजबाहिर लामोसमयसम्म राख्ने गरिएका खाने कुरा को सेवनले फुडफोईजन हुने गर्दछ । सबै ठाउँमा फ्रिज, डि-फ्रिज हुँदैन, उचित तापक्रम मिलाएर राख्ने सुबिधा न हुने भएकाले त्यस्ता खाने कुराले – झाडा-बान्ता, गेष्टाईटिसका साथै पाचनप्रणालीमा विभिन्न समस्याहरु देखापर्ने गर्दछन् । त्यसकारण चाडबाडको लागि भनेर ल्याएका खाने कुराहरुलाई पकाएर सकेसम्म लामोसमय बाहिर न राख्ने । यदि राख्नुपर्ने भएमा फ्रिज वा डि-फ्रिजमा राख्नु पर्छ । सरसफाईमा ध्यान दिने होभने दुषित खानाबाट हुने फुडपोईजनबाट बच्न सकिन्छ । अस्तु ।
साभार कान्तिपुर दैनिक
बच्चाको दाँत आउदा देखिने स्वास्थ्य समस्याहरु
२८ वैशाख, काठमाण्डौ । केहि दिन अगाडिको कुरो हो, मेरा एक जना मित्रको फोन आयो । उनले भने, डा. साब मेरो सानो नौ महिनाको छोरा, पातलो हरियो दिशा चार, पाँच पटक गर्नुका साथै ज्वरो पनि छ । स्वभाव एकदम चिडचिडापन छ । रोई रहन्छ, केहि गर्दा पनि चुप लाग्दैन । काखमा लिएर घुमाउदा मात्र चुप लाग्छ । बच्चाको डाक्टरलाई देखाएर औषधि ख्वाएको केहि भएन । के होमियोप्याथिमा यसको उपचार छ?
मैले समय लिएर आउनुस् हेरु ? भने । बच्चालाई परीक्षण गरि हेर्दा, दाँत आउने क्रममा उपरोक्त समस्या देखिएको रहेछ । लक्षण अनुसार केहि औषधि दिएर साता दिनपछि फलोअपमा आउनु होला भनेर पठाए । बच्चा अहिले ठिक छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।
यस किसिमको समस्याबाट धेरै जसो बच्चाहरु आफु त परेशान हुन्छ नै साथै आमाबाबुलाई पनि चिन्तित बनाउछ । आज यसै सन्दर्भमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छु । उमेरनुसार बच्चाको दाँत आउनु स्वभाविक र प्राकृतिक प्रकृया हो । यो प्रकृया कष्टरहित हुनपर्ने हो । तर यो त्यसबेला मात्र संभव छ जव तपाईको बच्चा पुर्णतया स्वस्थ्य होस् । धेरै जसो बच्चाहरुलाई दुधको दाँत निस्किने बेलामा धेरै जसो स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिनु पर्दछ अर्थात सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
दाँतको प्रकार : बच्चाको दाँत दुई प्रकारले आउँछ । दुधे दाँत र अर्को स्थाई दाँत । पहिलो पटक बच्चा लगभग पाँच/सात महिनाको उमेरमा दुधेदाँत निस्किन शुरु हुन्छ । दुई वर्ष नौ महिनाको उमेरसम्म बच्चाको दाँत आउने क्रम जारी नै रहन्छ । जसलाई अंग्रेजीमा प्राईमरी युरुपसन अफ टिथ भनिन्छ । यो स्टेजमा तलमाथि गरी बीसवटा दाँत आईसकेको हुन्छ। त्यसपछि ६ देखि १२ वर्ष उमेरको बीच दुधेदाँत झर्न शुरु भईहाल्छ र स्थाई दाँत आउने क्रम शुरु हुन्छ । जसलाई मेडिकल भाषामा (सेकेन्डरी युरुपसन अफ टिथ) भनिन्छ । दाँत आउने समयमा धेरै जसो बच्चाहरुलाई शारीरिक एवं मानसिक कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लक्षण : दाँत आउने बेलामा बच्चाहरुमा देखिने प्राय जसो लक्षणहरु निम्न लिखित छन्, * दाँत ढिलो गरी आउनु । * चिडचिडापन, बेचैनी, डर, रुनु र कराउनु । * ज्वरो आउनु, ज्वरोको साथै शरीर कडा हुनु, ऐठन हुनु । * टाउको दुख्नु तथा शीर गर्म हुनु । * पातलो हरियो नपचेको दिसा गर्नु । * आँखा रातो, रसिलो हुनु, चिलाउनु, कचेरा आउनु । * कान दुख्नु , कानबाट पीप आउनु । * मुखबाट अत्यधिक र्‍याल बग्नु । * गिजा सुन्निनु, गिजा समवेदनशिल हुनु । कुनै चिज मुखमा राखेर गिजाले टोक्नु । * पेट फुल्नु, दुख्नु, पातलो दिशा हुनु, कब्जियत हुनु, बान्ता हुनु, पेटमा चुर्ना पर्नु, खानमा रुचि नहुनु । *पिशाब फेर्ने बेला दर्द हुनु । *निद्रा नलाग्नु, निद्रामा तर्सिनु, रुनु, कराउनु । * छाला सम्बन्धि समस्या देखिनु आदि ।
सल्लाह/सुझाव : (क) सामान्यत केहि शारीरिक एवं मानसिक परेसानि जस्तै, हल्का ज्वरो आउनु । तीन चार पटक पातलो दिशा हुनु, बच्चाको दाँत आउने बेला हुने नै कुरा हुन् । यसै दौरान बच्चामा अलिक चिडचिडापन पनि हुन्छ । यी सबै सामान्य कुराहरु हुन् । यसको लागि कुनै औषधिको आवश्यकता पर्दैन । बच्चाको शरीरले आफै म्यानेज गर्छ । (ख) ख्याल गर्नु पर्ने कुरो के हो भने ज्वरो आएको बेला बच्चालाई नुहाउनु हुँदैन । चिसोबाट बचाउनु पर्छ । जबसम्म बालक आमाको दुध खान्छ, तबसम्म बच्चाको स्वास्थ्य आमाको स्वास्थ्यसंग गाँसिएको हुन्छ । यसकारण तनाव, डर, भय, घवराहटबाट आमाले बच्नु पर्दछ । यसको असर पनि बच्चामा देखिन्छ । अत: बच्चा बिरामी भएको बेला आमाले हड्बडाउनु हुँदैन । दुध ख्वाउने आमाले आफ्नो खानपानमा विषेश ध्यान दिनु पर्दछ । आमाले खाने कुरा जे खान्छिन्, त्यसको असर बच्चामा पनि देखिन्छ । अत: भोजन सुपाच्य र पोषिलो हुनु पर्दछ ।
होमियोप्याथिक चिकित्सा : बच्चाको दाँत आउने बेलामा हुने समस्याको लागि होमियोप्याथिकमा बिभिन्न औषधिहरु छन् । जसको प्रयोग लक्षणअनुसार गरेमा रामबाणको काम गर्दछ । होमियोप्याथिक चिकित्साले बच्चाको दाँत सजिलैसित आउनुका साथै उसको सम्पूर्ण स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । दाँत पनि बलियो र मजबुत हुन्छ । कसै-कसैमा दुधेदाँत नझरिकन स्थायी दाँत आउन थाल्छ । यि दाँतहरु बाड्गो-टिड्गो, बिकृत, रुपमा आउछन्, पछि कालो भएर जान्छ । स्थायी दाँत आउनु भन्दा अगाडि या यसको दौरान होमियोप्याथिक उपचार गराउनले यस समस्याबाट सजिलै बच्न सकिन्छ । दाँत उम्रिनसाथै कालो हुने प्रवृति हटेर जानुका साथ आउने स्थायी दाँतहरु स्वस्थ्य र बलियो हुन्छन् ।
औषधिहरु : रोगीको शारीरिक अवस्था एवं मानसिक लक्षणहरुलाई मध्ये नजर राखेर प्रयोग गरिने केहि औषधिहरु निम्न लिखित छन् : केमोमिला, बेलाडोना, पोडोफाईलम, जालपा, क्रियोजोट, फाइटोलेक्का, कल्केरियाफाँस, कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया कार्ब, मर्कसल, साईलिशिया, स्टेफसिग्रिया, सल्फर, थुजा , ईथुजा, टेरिबिन्थ, मेगनेशिया कार्ब, टयुबरकुलिनम आदि ।
औषधिहरुको प्रयोग आफ्नो नजिकको कुनै योग्य तथा अनुभवि चिकित्सकसंग परामर्श लिएर सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
साभार कान्तिपुरम डा. ललित कुमार मिश्र को लेख Mishradr.lk@gmail.com